असाेज २९, काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरमा करिब ४५ किलो सुन चढाइएको तथ्य फेला परेको छ। यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वर्ष दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा ५६ वर्षको अवधिमा ९ किलो मात्र सुन देखाएको थियो। आजकाे अन्नपूर्णमा गोपीकृष्ण ढुंगानाले समाचार लेखेका छन्,
प्रतिवेदन आउनुअघि कोषसँग न आफ्नो जग्गाबारे कुनै प्रामाणिक अभिलेख थियो न त सुनचाँदीबारे नै। ‘पशुपतिनाथको नाममा रहेका चलअचल सम्पत्ति सार्वजनिक गरेरै छोड्छौं। गम्भीर छानबिन र विशेष ताकेतापछि करिब ४५ किलो ६३६ ग्राम सुन रहेको तथ्य फेला पारेका हौं’, समिति संयोजक एवं कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाले अन्नपूर्णसँग भने।
अघिल्लो प्रतिवेदनअनुसार पशुपतिनाथमा ५६ वर्षको अवधिमा जम्मा ९ किलो २७६.६४ ग्राम सुन देखिएको थियो। कोषमा २०४५ देखि २०५२ सम्म चढाइएको सुनको विवरण पनि अभिलेखमा थिएन। २०३५, २०३६, २०४२, २०४३, २०४४, २०५३, २०६० र २०६३ सालको पनि सुनको अभिलेख भेटिएको छैन।
‘मिति उल्लेख छ, तर सुनको विवरण छैन’, एक कर्मचारीले भने, ‘सुन ढुकुटीमा नराखी गायब बनाइएको हुन सक्छ।’ यही शंकाका आधारमा खोजी गर्दा करिब ४५ किलो सुन फेला परेको डा. थापाले बताए।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले ३५० तोला, त्रिभुवनले ३०० तोला, बमबहादुर राणाले १०७ तोला, वीर शमशेरले १०२ तोला सुन चढाएको देखिएको छ। यसअघि प्रतिवेदनमा ३ सय १६ किलो ५८६ ग्राम चाँदी पशुपतिमा चढाइएको तथ्यांक पाइएको थियो। उनका अनुसार, अहिले १३ सय २५ किलो ९२७ ग्राम चाँदी रहेको पाइएको छ।
करिब एक हजार किलो चाँदी थप फेला परेको हो। यसबाहेक मुकुट आदिमा हिरा, मुगा र माणिकसमेत जडित भएको पाइएको छ। चढाइएका सुन र चाँदी मूल ढुकुटीमा राख्ने गरिन्छ। सर्वोच्च अदालतको २०६६ पुस २७ को परमादेशका कारण मूलढुकुटी खोलेर हेर्न मिल्दैन। ढुकुटीभित्रका चलअचल सम्पत्तिबारे कोष पूर्णरूपमा अनभिज्ञ छ। भित्र राखिने चलअचल सम्पत्तिबारे कोषसँग पूर्ण अभिलेखसमेत थिएन।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइने दैनिक भेटी बैंकका कर्मचारीसमेत बसेर गणना गरी सोही दिन बैंकमा दाखिला सुरु गरिएको छ। हरेक दिन साँझ कोषका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी बसेर गणना गर्दै आएकोमा सोमबारदेखि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका कर्मचारीसमेत गणनामा सहभागी भएका छन्।
यस सम्बन्धमा कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र बैंकका प्रमुख कार्यकारीअधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेबीच हस्ताक्षर भएको कोषका प्रशासकीय अधिकृत गौरीशंकर पराजुलीले जानकारी दिए। ‘चाँडै यो गणनाको सीसीटिभीमार्फत भक्तजनले पनि प्रत्यक्ष हेर्न पाउनेछन्’, उनले भने।